Home Wararka RW Rooble intii Doorashada Ku Mashquulsanaa Wasiiradiisa Boobka Hantida Qaranka ayey Wadeen.
RW Rooble intii Doorashada Ku Mashquulsanaa Wasiiradiisa Boobka Hantida Qaranka ayey Wadeen.
Cidi ma diidi karto inuu ku guuleystay qabashada doorashada qeybteeda hore welina uu u harsan tahay hawshii ugu adkeyd, wuxuuna ku mudan yahay amaan iyo qiimeyn weyn. Hasa yeeshee waxaa la hoos u dhac weyn ku yimid:
A. Amaanka oo magaalada caasimadda ah ee ku nool yahay habeen Walba qof iyo ka badan ayaa lagu dilaa, iyadoo cabsiinata, qaraxyada iyo baadda joogtada ah ay u dheer yihiin oo uu qof waliba cabsi kku seexdo.
B. Arrimaha dowladnimada iyo maamulka waayo:
Wasiirkiisii badroolka Cabdurashiid M Axmed oo uu xeer ilaaliyaha guud u yeeray si wax looga weydiiyo heshiiskii uu ajanabiga u saxeexay inay ku xaraashaan datada betroolka welina lama oga inuu hortagay iyo in kale, kaas oo ahayd inuu eryo oo uu ka saaro golaha wasiirada maadaama aan hadda la ogeyn waxa kale ee u uku saxeexayo awoodda wasiirnimo, taas oo xataa uu RW Rooble kula dembiyoobayo.
Mid kale Cabdi Siciid Muuse ayaa hadda dadaal ugu jira inuu suuqa geeyo kadibna ka soo iibsado gurigii safaaradda Rooma oo uu si sharcidarroo ah u geystay wiil uu Farmajo adeer u yahay, iyadoo Farmajo iyo Rooble ay horay u joojiyeen ama decreto beenaad u soo saareen maadama aysan dhaqangal ahayn in aan xelligaan kala guurka ah wax la kala badali Karin.
RW Rooble oo dhacdooyinkaan ka wada aamuusaan, taas oo dad badani u macneysteen inuu wax ka og yahay boobka hantida qaran sida iibsiga Guryaha safaaradaha oo ay hadda ka socdaan dhowr dal MOLna ay daba gal ku hayso. Sidoo kale boobka shidaalka oo isagana meelo kala duwan hawshiisyo kale socdaan sida RW hore Xasan Cali KHeyre oo isagana qolooyin Ruush ah heshiisyo hoosaad la wada una ballan qaaday in loo saxeexi doono marka ugu horreysa oo uu dalka Madaxweyne ka noqdo.
Iisku soo duub, RW Rooble waa inuu joojiyaa xaraashka Safaaradda Rooma, xilkana uu u dhaafaa safiirka Rooma dalka Somaliya u fadhiya onta dowlad cusub laga dhisayo oo hadda la ogaaday sababta loo badalayo, taas oo ah in Meesha laga baneysto si guriga loo iibsado. Haddii uu ka aamuso Rooble waxay noqonee dembi uu indhaha ka qarsaday waxayna dhaawici doontaa magaca uu hadda yeeshay. Sidaas darted badbaadinta hantida umadda iyo magaca uu sameeyey waa in labada wasiir xilka laga qaadaa waana waajibaad iyo badbaado qaran.
Previous articleAxmed Karaash ” Puntland maahan boombale dhabarka lagu qaato ee Ukraine lala aado
Next articleAadan Madoobe ‘oo la wareegay’ amniga doorashada, soona rogay amar culus
(Faah Faahin) Qarax ka dhacay isgoyska Sayidka iyo faahfaahin laga helay